Ahoana ny fomba hanokafana dispensary any New Jersey - rongony New Jersey
Ahoana ny fomba hahazoana a fahazoan-dàlana dispensary any New Jersey? Izany no fanontaniana tokony apetrakao amin'ny tenanao raha mieritreritra ny hanokatra dispensary any New Jersey ianao. Raha te-hahazo fahazoan-dàlana, dia mila manaraka ny fepetra napetraky ny lalàna vaovao momba izany ianao ary homena fahazoan-dàlana.
Nanjary ara-dalàna tany New Jersey ny orinasa marihuana ara-pitsaboana tamin'ny 2010 - na dia izany aza mafy fehezina- mba hanomezana fomba fijery vitsivitsy momba an'io: na dia manana mponina 8.8 tapitrisa aza ny fanjakana, tsy misy afa-tsy dispensary rongony 13.
Nanomboka ny volana novambra 2020, nanjary ara-dalàna ny orinasa marijuana fialamboly, noho ny fandraisana andraikitra amin'ny fifidianana. Araka io fandraisana andraikitra io, Ny vaomiera misahana ny rongony (CRC) dia hanara-maso ny programa marijuana an'ny fanjakana sy ny fanomezana fahazoan-dàlana mifandraika amin'izany., ary eo amin'izy ireo, ny fahazoan-dàlana dispensary. Na izany aza, ny faritany sy ny tanàna misy ny orinasa dia mety hamaritra ihany koa raha afaka manangana orinasa ao anatin'ny fari-tanin'izy ireo ianao na tsia.
Miaraka amin'ny loharanom-baovao sasany milaza fa ny haben'ny tsenan'ny marijuana ara-dalàna dia andrasana hahatratra $ 23 miliara amin'ny 2025, ny zavatra tokana azo antoka momba ity fanjakana ity dia ny fananana vola be azo amin'ny Cannabis ara-dalàna any New Jersey - raha manapa-kevitra ianao fa vonona handresy ny birao rehetra sy ny fifaninanana henjana.
Fahazoan-dàlana hividianana marijuana any New Jersey
Mampalahelo fa ny 22 Aogositra 2019 no daty farany hanaovana fangatahana lisansa fizarana marijuana ara-pitsaboana any New Jersey ary nanomboka teo dia mbola tsy nisy fe-potoana hafa hangatahana izany. Na izany aza, tsy midika izany fa tsy hisokatra tsy ho ela. Inona koa ny ankoatr'izay: miaraka amin'ny fankatoavana marijuana ampiasan'ny olon-dehibe, hisy fisokafana ho an'ireo orinasa hahazo fahazoan-dàlana dispensary atsy ho atsy.
Ka izao no fotoana tokony hahalalanao izay hatao, izay antenaina, ary ohatrinona ny vidin'ny zava-drehetra, mba hahafahanao mandroso amin'ny fifaninanana.
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HANOKAFANA MICROBUSINESS CANNABIS AO JERIA VAO
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HANOKAFANA NY LISEN'NY BUSINESS CANNABIS AO JERSEY Vaovao
Fanokafana New Jersey Dispensary Cannabis
Na dia nisy aza ny fahatarana tamin'ny fanaovan-tsonia ny volavolan-dalàna, ary ny lalan'ny varotra fialam-boly amin'ny fiandohan'ny 2021 dia mazava, ny varotra fialamboly dia antenaina haharitra enim-bolana vao hahatratra ny tsena.
Costs hanokatra ny varavaranao dia mety mitentina 500,000 $ mihoatra ny tapitrisa arakaraka ny vidin'ny trano sy tany ary ny haben'ny fandidiana.
Zava-dehibe ny milaza fa ny dispensaries voalohany izay hivarotra rongony fialam-boly dia dispensary marijuana ara-pitsaboana efa misy, ary na dia mbola tsy misokatra aza ny varavarankely amin'ny fampiharana, dia tsara ny miomana mialoha ny fizotran'ny fampiharana.
Makà fahazoan-dàlana amin'ny famoahana New Jersey
Azonao atao ny manamarina ny antsipiriany momba ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana hividianana rongony Eto. Nahazo a ny fahazoan-dàlana rongony dia azo inoanay sarotra sy lafo. Ankoatr'izay, mazàna dia misy fepetra hentitra ho an'ireo tompona dispensary ho avy.
Misy fampandrenesana miandry momba ny fizotry ny fahazoan-dàlana. Na izany aza, araka ny volavolan-dalàna rongony fialam-boly ankehitriny:
“Ny fangatahana fahazoan-dàlana tsirairay avy dia isaina sy dinihina mifototra amin'ny ambaratonga isa miaraka amin'ny komisiona mamaritra ny habetsaky ny isa, ny sokajy teboka ary ny rafitra fizarana isa araky ny fitsipika. Ny komisiona dia manondro isa sy laharam-pahamehana ny mpangataka [rehetra, hatramin'ny isa kely indrindra hatramin'ny isa kely indrindra], arakaraka ny rafitry ny teboka. ”
Ity fomba "point point" ity dia mitovy amin'ny hitantsika tany amin'ny fanjakana hafa izay nanara-dalàna ny rongony ampiasain'ny olon-dehibe. Ny fampiharana anao dia isaina amin'ny alàlan'ny rafitra teboka iray izay mihevitra ny traikefanao sy ny fahaizanao ary ny fahaizan'ny ekipanao amin'ny lohahevitra maro. Ity misy santionany amin'ny lohahevitra sasany azonao dinihina:
Drafitra misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana
Fomba fiarovana sy fiarovana
Drafitra fiarovana ny cyber
Drafitra fitantanana vonjy taitra
Fanakanana ny fiviliana
Drafitra fanazarana fidiovana
Fomba fitaterana tranga ratsy
Porofon'ny fahaiza-manao ara-bola hanatanterahana drafitra
Araka ny hitanao, ankoatry ny fahalalana rongony mivantana dia tsy maintsy manam-pahalalana amin'ny lohahevitra maro ianao. Izany dia satria ny tsirairay amin'ireo lohahevitra etsy ambony dia ilaina amin'ny fampandehanana orinasa rongony, ary ny banga fampahalalana rehetra dia hanohintohina ny fahombiazana maharitra.
Ary koa, ny ekipanao dia tokony manomana a raharaham-barotra drafitra, izay tokony hahitana:
Drafitra fanaraha-maso kalitao sy fiantohana kalitao
Drafitra fandefasana / asa
Drafitra fanarahana ny asa
Drafitra ho an'ny mpiasa sy ny famoronana asa
Izay zavatra rehetra heverinao fa hanampy anao hisongadina sy hisarika mpampiasa vola
Fepetra takiana amin'ny New Jersey - Azonao atao ny manisy antsipiriany momba ny fandrakofana ny rafitra fiarovana anao, ny fitaterana vokatra azo antoka, ny fanarahana ny vokatra, ny drafitra fako ary ny zavatra takian'ny fanjakana hafa. Mariho fa mety tafiditra ao anatin'ny fangatahanao ireo.
Miaraka amin'ny antony manosika sy fidirana amin'ny loharano ilaina, ny biraonay dia afaka manampy anao amin'ny fomba mahomby manomboha dispensary rongony mahasoa ao New Jersey. Na dia zava-dehibe aza ny manamarika fa ity dingana ity dia mitaky fotoana na dia manana ny enti-manana aza ianao.